Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka gaadhey jibuuti – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka gaadhey jibuuti
PM Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka u ambabaxay #Djibouti si ay uga qeyb galaan shir wadatashi ah oo kusaabsan xiriirka #Somalia iyo #Somaliland.
Madaxweynihii Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo, oo uu wehliyo Raiisul Wasaare Xasan Cali Khaire, iyo Afhayeenka Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka, Maxamed Mursal, ayaa u ambabaxay Jabuuti si ay wadahadalka una galaan waftiga ka socda somaliland.
Waxaa kasii horeeyey tagitaanka jibuuti Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi .. Kulankii u dhaxeeyay labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu daba socday casuumaad uu ka helay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Geelle ayaa sheegay in kulankii shalay uu ahaa mid daba gal ah oo uu ku yimi raysalwasaarihi hore ee PM Abiy Ahmed.
Previous articleKooxda al-Shabaab ayaa sheegtey inay dhiseen xarumo lagu daaweynayo COVID-19
Next articleTaliban ayaa dishay, dhaawacay in kabadan 400 ciidan
Qofkii sadexaad oo u dhintey itoobiya xanuunka #COVID19
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo qaabilay Madaxda Hay’addo Caalami ah